Stats fivarotana 19 ho an'ny mailaka, telefaona, Voicemail ary fivarotana ara-tsosialy | Martech Zone
Stats fivarotana 19 ho an'ny mailaka, telefaona, Voicemail ary fivarotana ara-tsosialy
Alakamisy 10, 2016 Alarobia 30, 2017 Andrew Gazdecki
Ny varotra dia orinasa ataon'ny olona izay misy ifandraisany amin'ny vokatra ny fifandraisana, indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra rindrambaiko. Ny tompona orinasa dia mila olona azon'izy ireo ianteherana amin'ny teknolojia. Hampiasain'izy ireo izany zava-misy izany, ary hiady ho an'ny vidiny tsara kokoa, saingy lasa lalina kokoa noho izany. Ny mpivarotra varotra sy ny tompona SMB dia tsy maintsy miray saina, ary zava-dehibe kokoa ny hisian'ny mpivarotra am-barotra hitrangan'izany. Tsy fahita matetika ny mpanapa-kevitra hanadino ireo solo-tena tsy tian'izy ireo, na dia mandoa vola bebe kokoa aza izany.
Misy vazivazy taloha ao amin'ny fitantanana fa tsy tokony ho hendry ny rep mpivarotra - mahay fotsiny. Ny fantatry ny rehetra amin'ny varotra dia ny fomba fanakatonana ny fifanarahana. Raha mahavita an'izany izy ireo dia hikarakara ny tenany ny ambiny. Ireo mpikarakara birao sy mpitan-kaonty dia afaka hikarakara ny ambiny. Ny tena zava-dehibe tadiavin'ny akanjo amin'ny rihana ambony dia ny vola azon'ny mpitondrana fivarotana.
Ny fiasana amin'ny varotra dia mitaky fisainana hafa ihany koa. Ny mpandrafitra dia mahafantatra rehefa misy zavatra atsangana sy vita. Ny asany dia eo alohan'izy ireo ary azo tsapain-tanana. Ny mpiasa ao amin'ny fivorian'ny fiangonana dia hahita izay nampiana tao amin'ilay widget izay nanampy azy ireo hanorina, ary ho fantatr'izy ireo ihany koa hoe firy ny singa vitany tao anatin'ny iray andro. Ny mpivarotra dia tsy manana an'izay azo tsapain-tanana. Ny fahombiazan'izy ireo dia refesina toy ny isa amin'ny lalao iray. Fantatr'izy ireo fa azony izany, na dia tsy zavatra azon'izy ireo kasihana sy tsapa aza izany. Ny scorecard misy azy dia misy vola dolara sy quota.
Tsy sehatra tsy mijanona koa io. Ny teknolojia dia nanova ny varotra toy ny indostria rehetra. Ny media sosialy dia nanome fomba bebe kokoa hahatratrarana ny mpanjifa ary ny zavatra toy ny mailaka dia mety ho fitaovana mahomby ho an'ireo izay mahay mampiasa azy. Ity infographic avy amin'ny Bizness Apps mampiseho ny teknolojia misy fiantraikany lavitra eo amin'ny varotra, ary ny fanovana ny lalao.
Sata fivarotana manaitra 19 izay hanova ny fomba fivarotanao
Momba ny Apps Bizness
Bizness Apps dia WordPress ho an'ny famoronana fampiharana finday. Maro amin'ireo mpanjifanay no mpamorona fampiharana fotsy - masoivohon'ny marketing na ny famolavolana izay mampiasa ny sehatray hananganana rindrambaiko mahomby ho an'ny mpanjifa orinasa kely.
Tags: fampiharana biznessFanamafisana ny varotrastatistikan'ny varotrastatistikan'ny varotramailaka fivarotanafivarotana mailaka fivarotanafivarotana ara-tsosialystatistikan'ny varotra an-tarobia
Andrew Gazdecki no mpanorina sy CEO an'ny Bizness Apps - fanaovana fampiharana finday mora vidy sy tsotra ho an'ny orinasa kely. Sehatra fampiharana iPhone, iPad, Android & HTML5 natao ho azy izahay izay mamela orinasa kely hamorona sy hanitsy ary hitantana ny fampiharana finday tsy misy fahalalana ilaina amin'ny programa.
Ahoana no namitan'i BoomTown ny faran'ny Martech nataony tamin'ny Intelligence Call
Halavan'ny atiny: Mandrakotra ny fampiroboroboana ny fifantohana